कुस्मा नगरपालिकाको बिकासका लागि गुरु योजना बनाएर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता ! – ebaglung.com
२०७३ चैत्र १०, बिहीबार ०८:२९	Top News, थप समाचार
पर्वत २०७३ चैत १० । पर्वत उद्योग वाणिज्य संघले कुस्मा नगरपालिकाका नवागत कार्यकारी अधिकृत हिरामणि सुवेदीलाई स्वागत गरेको छ । संघले बुधबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी कार्यकारी प्रमुख सुवेदीलाई स्वागत तथा सम्मान गरेको हो ।
स्वागतको प्रत्युत्तरमा कार्यकारी अधिकृत सुवेदीले कुस्मा नगरपालिकाको विकासमा नगरपालिका र उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्य आवश्यक रहेको चर्चा गर्दै कुस्मा नगरपालिकाको स्तरोन्नतिका लागि गुरुयोजना निर्माण गरेर अघि बढ्ने बताएका थिए ।
संघका अध्यक्ष हरिओम शर्मा लामिछानेले विगतमा जस्तै नगरपालिका र संघ वीचको सामिप्यता आगमी दिनमा अभैm प्रगाढ हुनुपर्ने बताएका थिए । उनले नगरपालिकाको विकासका लागि उद्योगी व्यवसायीको तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए ।
अध्यक्ष लामिछानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन महासचिव ठाकुर वि. पौडेलले गरेका थिए भने बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपी अधिकारीले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए ।